खजुरा क्वारेन्टाइनका सबै घर गए – sunpani.com
खजुरा क्वारेन्टाइनका सबै घर गए
खजुरा – बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैलाई घर पठाइएको छ । स्वास्थ्य जाँच गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाइएको हो ।
क्वारेन्टाइनमा रहेका ९ जना आइतबार घर गएका छन् । हालसम्म क्वारेन्टाइनमा ७४ जना बसेर अबधि पु¥याउदै घर फर्किएका हुन् । बाँकी रहेका ९ जनाको बिदाइ गर्दै खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा सहयोग गर्ने सबैमा आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
वडा नं. १ का अध्यक्ष सुमन मल्लको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति रहेको भए पनि मल्ल सवारी दुर्घटनामा घाइते भएपछि सो जिम्मेवारी वडा नं. २ का अध्यक्ष देवीलाल खनालले हेर्दै आएका थिए । हरेक दिनजसो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा खजुरा गाउँपालिका राजनीतिक सल्लाहकार भीम ओली, कार्यपालिका सदस्य फुलमाया जैसी, स्वयंसेवक व्यवस्थापन समिति संयोजक शालिक खड्का, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडा नं. १ र २ का जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका थिए ।
खजुरा गाउँपालिका उपप्रमुख एकमाया बिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसी, समाजसेवी गेहेन्द्र धिताल विदाई कार्यक्रममा उपस्थित थिए । हाललाई स्थगित गरिएको क्वारेन्टाइन आवश्यकता परे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ ।